Amaphoyisa ase-Malawi akhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kukaMprofethi uBushiri | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa ase-Malawi akhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kukaMprofethi uBushiri
Umndeni kaShepherd Bushiri uvinjelwe ukusuka e-Malawi uye e-Kenya ekuseni ngoMsombuluko, ngoba kubikwa ukuthi indodakazi yalo Mprofethi ibidinga usizo oluphuthumayo lokwelashwa.
Indodakazi nomamezala kaBushiri bavinjelwe ukuba bagibele indiza e-Kamuzu International Airport e-Lilongwe, ebiya e-Kenya.
Amaphoyisa ase-Malawi nawo asekhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kwalowo obalekile, ozibiza ngoMprofethi.
Okhulumela uBushiri u-Ephraim Nyondo ukuqinisekisile esitatimendeni ukuthi amaphoyisa ase-Malawi akhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kowesilisa owaziwa ngo”Major 1″.
“Ngingakuqinisekisa ukuthi ngoLwesihlanu, mhla ziyi-19 kuNhlolanja, indodakazi kaMprofethi uShepherd Bushiri ivinjelwe ukuba indize ibheke e-Nairobi, e-Kenya, iyofuna usizo lwezempilo. Yayihamba nabaqaphi abathathu. UMprofethi uBushiri noMprofethikazi uBushiri babengeyona ingxenye yaleli thimba.
“Indodakazi, eneminyaka eyisishiyagalombili, yathunyelwa ngokufanelekile ngongoti bezempilo base-Malawi ukuba iyofuna olunye usizo lokwelashwa kanti yonke imininingwane edingekayo yokungena kuleli yayikhona ukuze kube lula ukuhamba kwayo nge-ambulensi eyindiza eqashiwe.
“Kuze kube manje, ihhovisi lami alikaze linikezwe noma iyimiphi imininingwane yokuthi kungani ingane inqatshelwe ilungelo lokuthola usizo lwezempilo ngokusemthethweni ngemuva kokudluliselwa ngokufanele ngudokotela onekhono.
“Isimo sengane sisalokhu sibucayi esikhungweni sezokwelapha esifanayo ebesimdlulisele ukuyofuna olunye usizo e-Kenya,” kusho u-Ephraim.
U-Ephraim wengeze ngokuthi bekungekhona okokuqala ukuthi ingane, ngenxa yesimo sayo sempilo, idluliselwe e-Kenya ukuze ithole usizo lwezempilo. “Ingane indizele lapho amahlandla amaningi futhi kuyangimangaza lokhu kuvinjelwa kwayo.”
Uthe kumthusile ukuthi ngemuva kwamahora ambalwa kuphela ingane inqatshelwe ilungelo layo lempilo nelungelo lokuphila, amaphoyisa ase-Malawi akhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kukaMprofethi uBushiri noMprofethikazi uMary Bushiri.
“Okwamanje anginazo izizathu zencwadi egunyazayo futhi, ngokusho kwabezindaba, namaphoyisa awakayichazi le ncwadi egunyazayo.”
Uthe ngeSonto, amaphoyisa ase-Malawi agasele kwelinye lamagceke kaMprofethi uBushiri ukuze akhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa – okuyisenzo abameli bakhe abasiphikise ngesinqumo senkantolo.
UMajor 1 nonkosikazi wakhe babaleka eNingizimu Afrika baya e-Malawi ngoLwezi ngemuva kokuthola ibheyili.
Babhekene namacala okweba, ukukhwabanisa imali nenkohlakalo mayelana nohlelo lokusatshalaliswa kwemali eyizigidi eziyi-R100.
Umthombo wesithombe: @PsBushiri